चट्याङबाट बच्न चाहानुहुन्छ ? पालना गर्नुहोस् यी कुराहरु: विज्ञ | suryakhabar.com
Home पु.समाचार समाचार चट्याङबाट बच्न चाहानुहुन्छ ? पालना गर्नुहोस् यी कुराहरु: विज्ञ
चट्याङबाट बच्न चाहानुहुन्छ ? पालना गर्नुहोस् यी कुराहरु: विज्ञ
on: ५ बैशाख २०७६, बिहीबार ०९:४९ In: समाचारTags: No Comments
स्याण्डविच कार्यक्रमअन्तर्गत श्रीलङ्का र स्विडेनबाट चट्याङमा विद्यावारिधि गरेका डा. श्रीराम शर्माका अनुसार विसं २०६८ देखि २०७४ सम्म गरिएको अध्ययनमा नेपालमा हरेक वर्ष चट्याङकै कारण ११० ले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । सावधानी अपनाउन नसक्दा कतिपयले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेको उनले बताए ।
चट्याङको फाइन सिग्नेचर विषयमा नेपालमा पहिलो विद्यावारिधि गर्नुभएका डा पितृभक्त अधिकारी चट्याङ परेको समयमा निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए । विदेशको एउटै फुटबल मैदानमा एकै समूहका ११ खेलाडीले चट्याङका कारण ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै उनले सावधानी अपनाउनु नै बच्ने उपाय भएको बताए ।
उनका अनुसार घर बाहिर हुँदा खुला ठाउँमा रहेमा टाउको र खुट्टा जोडेर गोलो परेर बस्नुपर्ने हुन्छ । रुखको नजिक नबस्न, बिजुली र फोनको पोल, अग्ला भवन नजिक पनि नबस्न उनले सुझाए । विद्युतीय सामग्री प्लगमा नजोड्न र ल्याण्डलाइन फोनमा कुरा नगर्न पनि अधिकारीको सुझाव छ । तर मोबाइल फोन भने चलाउन सकिने उनले बताए।
चट्याङ प्राकृतिक प्रक्रिया हो । अहिले मात्र होइन, मानव जाति अथवा जीवजन्तुको पृथ्वीमा अस्तित्व हुनुभन्दा अगावै चट्याङ पर्ने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ । इञ्जिनीयरिङ विषय अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएका डा. शर्मा पृथ्वी र वायुमण्डलमा आउने सूर्यका विभिन्न किरणले पृथ्वी वा वायुमण्डलमा विद्युतीय चार्ज उत्पन्न गराइरहने बताउँछन् । यसरी उत्पन्न विद्युतीय चार्ज असन्तुलित बन्दा त्यो असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि चट्याङ पर्ने उनको भनाइ छ ।
शङ्कास्पद वस्तु सेनाद्वारा डिस्पोज, एक घाईते
५ बैशाख २०७६, बिहीबार ०९:४९